I-10x1 Podcast: Ilinde i-Keynote | IPhone iindaba
Sazisa isizini kwiveki enye ngaphambi kwesiganeko sonyaka apho sinokubona khona i-iPhone entsha, okanye mandithi, i-X X entsha. Liza kuba ngubani igama? Zeziphi iindaba zekhompyutha eziza kubandakanya? Aza kuba ngantoni amaxabiso akho? Ngaba siza kubona iApple Watch Series 4 enescreen esikhudlwana? Zeziphi izinto ezintsha eziza kuziswa yi-iPad Pro entsha ngaphandle kwesakhelo? Ngaba kuya kubakho uhlaziyo kwiiMacs? Mininzi imibuzo ekusafuneka iphendulwe. Konke oku nokunye okuninzi kwisiqendu sokuqala seli xesha leshumi. Ngaba uza kuyiphosa?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » podcast » IPodcast 10 × 1: Ukulinda i-Keynote
Ungaguquguqula njani iifomathi kwifomathi ye-HEIF kwiifomathi zesiko ezinjengeJPEG
Inkqubo yeziganeko yeApple TV ngoku ihlaziywa ngokwenziwa kwe-iPhone entsha